Ampatsiahiviko hatrany moa fa miainga amin'ny teti-bola efa ananantsika amin'izao dia azo atao tsara ny mampiditra ny olona rehetra tsy an'asa hanao Service National, ka toy izao ny karama raisina amin'izany:
1- Service National:
Ny andraikitra tazonina no hisy tambi-karama na indemnité amboniny, ny manana diploma na fahaizana amboniny dia hisy tambiny amboniny ihany koa, fa anamorana ny kajy dia izao amin'ny ankapobehany ny vatakarama:
Licence miakatra: 1 000 000 Ariary/isam-bolana
Bac hatramin'ny Licence: 500 000 Ariary/isam-bolana
Latsaky ny Bac: 200 000 Ariary/isam-bolana
Raisina toy ny Service National ireo Mpitondra Fivavahana, Mpitarika sy mpiasan’ny Association, Mpitarika sport sy Tanora, ireo Mpikarakara tokantrano, ireo manana kilema ara-batana.
Misy asa amboniny ampanaovina azy ireo amin’ny maha Service National azy.
Tsy maintsy miditra OSTIE na OSIE na ny mifandraika amin'izany ny Service National rehetra.
2- Mpiasa tsy miankina na privé:
Ho an’ny Mpiasa tsy miankina, dia ny hetra aloan’ny orin’asa no amenoan’ny Fanjakana ny karama efa omen’ny Mpampiasa hitovy tantana amin'ireo voalaza etsy ambony ireo.
Ampidinina ny IRSA, na ny hetra alaina amin'ny mpiasa sy mpampiasa.
Tsy maintsy miditra CNAPS na Assurance Caisse de retraite ary OSTIE na OSIE na ny mifandraika amin'izany ny mpiasa rehetra.
3- Mpiasam-panjakana sy Foloalindahy, Salaire Fonctionnaire et Militaire
Ampiharina ny fampitoviana ny vatakarama, arakaraky ny maripahaizana, ny andraikitra ary ny grady, ny fahelana teo amin'ny asa.
Hitovy ny ministera rehetra fa tsy misy mpiasam-panjakana ambony noho ny hafa.
10% avo heny amin'ny Service national ny karaman'ny mpiasam-panjakana ambany indrindra, raha samy mitovy diploma, misy tambikarama amboniny kosa noho ny andraikitra tazonina.
Mahazo trano sy sosialy ary fitsaboana ny mpiasam-panjakana.
Fifaninana arahina fepetra fahaizana manokana, misokatra amin'ny rehetra avokoa ny fidirana Tale Jeneraly. Tsy miova isaky ny fialan'ny minisitra, manaraka kosa ny fepetra famindran-toerana toa ny mpiasam-panjakana rehetra.
Fifaninana anatiny kosa ny Tale sy chef de service.
4- Vatsim-pianaran'ny Mpianatra arak'asa sy Universitaire, na privé io na fanjakana.
Ampaha efatry (1/4) ny vola raisin'ny Service national arakaraky ny niveau diplôme no raisin'ny mpianatra, ankoatran'ny équipement.
Manao engagement décennal izay mandray bourse rehetra.
Tsy maintsy manao stage any amin'ny orin'asa kosa izy ireo ny atsasam-potoana ianarany, ny fanjakana no miantoka azy, fa ny orin'asa tsy maintsy mandray stagiaire arakaraky ny isan'ny mpiasa ao aminy.
Hisy fananganana Université lehibe isaky ny Faritra 3, hisy trano hipetrahan'ny mpampianatra, hipetrahan'ny mpandraharaha, ary hipetrahan'ny mpianatra.
Misy hofa-trano fandraisana anjara amin'izany.
5- Mahazo vary 150kg isam-bolana, isan-tokatrano kosa ny Malagasy rehetra, atao ao anatin'ilay carte électronique misolo ny vola, iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy hifehezana ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation.
6- Ny enti-manana, Budget sy ny fitsinjarana azy:
15% moa ny tahan'ny fampidiran-ketra eto amintsika izao (pression fiscale), manome 5000 miliara ariary izany amin'izao.
Tetibola 5000 miliara ariary
Fokotany (20 000 isa) 50%: 125 millions ariary/fkt 625 millions fmg
Kaominina (1 600 isa) 25% 80 millions ariary 400 millions fmg
Faritra (3 isa) 10%: 170 miliara ariary 850 miliara fmg
Foibe 15%: 800 miliara ariary 4000 milliara fmg
Rehefa avadika electronique ny vola, dia hiditra daholo ny hetra, ary azo tombanana 5 avo heny ny fidiran'ny hetra.
Ny vary fotsiny dia hisy 30 milliards de $ no hiditra aminy mandritra ny 5 taona, rehefa vatsiana fitaovana, masomboly, zezika, ka hiakatra ny rendement (4 tonnes/ha) sy ny tany volena (10%), io ilay averina amin'ny Malagasy ny 150kg isan-tokatrano, isam-bolana.